I-18 / 05 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: Meyi 18, 2020
Umzuzu wokugcina: U-Erdogan Umemezela I-Curfew Emadolobheni angama-81 Ngesikhathi Somkhosi
Ngemuva komhlangano wekhabinet, umzuzu wokugcina ovela kuMongameli Recep Tayyip Erdoğan, owenze isitatimende, unqunyelwe isikhathi sokuya ekhaya ezifundazweni ezingama-81 ngesikhathi somkhosi. 23-24-25 kanye 26 Meyi 2020 (kufaka phakathi u-23 no-26) [Okuningi ...]
Ngubani uSüleyman Reyhan?
Wazalelwa eKaramürsel ngo-1970. Ngemuva kokuphothula esikoleni i-Imam-Hatip High School, waqala izifundo zakhe zaseyunivesithi e-Anadolu University Faculty of Business Administration ngonyaka we-1989. Ngemuva kokuphothula iziqu zakhe, waphothula izifundo zakhe zokufunda ngezimali. I-Eskişehir Osmangazi University Faculty of Education [Okuningi ...]
Isithasiselo iKhabhinethi Ezibulala I-Coronavirus Kumasekhondi angama-30
USolwazi wokucwaninga kwe-quantum eMaltepe University. UDkt. U-Afif Sıddıki nethimba lakhe baklame ikhabethe lokuvikela ukubulala amagciwane ukuvikela ochwepheshe bezokunakekelwa kwempilo kanye neziguli ekuthelelekeni ngegciwane ekulweni nobhubhane lwe-coronavirus. IMaltepe University Ubunjiniyela neSayensi Yemvelo [Okuningi ...]
Izindiza ZaseTurkey Zokuqala Izindiza Ezivela ku-İzmir
ITurkey Cargo (THY), uhlobo lomthwalo wezimoto zaseTurkey Airlines, eye yathuthukisa inani eliphakeme kakhulu lokukhula phakathi kwabathwali bezindiza abahamba phambili abangama-25, ihamba ngomkhumbi i-Izmir mhlaka 28 Meyi, ngendiza nsuku zonke. [Okuningi ...]
Isitimela sokuqala sokuthumela sithuthele eYurophu ngeMarmaray
Izimoto ze-Mars ezivela ngoMeyi 15 ujantshi wokuthumela imithwalo yamazwe omhlaba ezenziwa eTurkey zaqala njengoba kwahlelwa njengokusetshenziswa kweMarmaray kokuqala. Ilungu leBhodi yeMars Logistics Board uGökşin Günhan uthe ulayini weMarmaray [Okuningi ...]
E-China: Kwasungulwa uphenyo lweCovid-19
I-China isivele isimemezele ukuthi kusesekuqaleni ukuqala kophenyo lweCovid-19. I-China Ministry yezangaphandle SözcüUSü uthe sekusekuqaleni kokuqala kophenyo ngemvelaphi nokusabalala kwegciwane le-corona, elabulala abantu abangaphezu kuka-300.000 emhlabeni jikelele. [Okuningi ...]
I-Ankaray Line izonwetshelwa eMamak ngeziteshi eziyi-8! Kushicilelwe Isimemezelo Seethenda
UMasipala we-Ankara Metropolitan uzoxhuma isifunda saseMamak, esisempumalanga yeDolobha, kumugqa we-ANKARAY osebenza phakathi kwe-Ankara Intercity terminal Operation (AŞTİ) neDikimevi. Umugqa wephrojekthi weDikimevi-Natoyolu Light Rail System (HRS) "Ukuqaliswa [Okuningi ...]
Izinyathelo zokuphepha ze-Kovid-19 ezithathwe Ezokuhamba Abagibeli!
UNgqongqoshe uKaraismailoğlu, esitatimendeni sakhe, uthola ukuthwala imigwaqo ngesikhathi sangempela neTransation Electronic Tracking and Control System (U-ETDS), enikeza umkhondo we-elektroniki wezimpahla, wezimpahla nokuhamba kwabagibeli oqhutshwa yizinkampani ezisebenza kwezokuhamba. [Okuningi ...]
Uhlu lwezinombolo zocingo lwe-TCDD - Uhlu olukhona ngo-2020
Sikuqoqele i-TCDD Train Station Ucingo Izinombolo zefoni. Okokuqala, sincoma ukuthi ushayele inombolo yocingo ye-TCDD ejwayelekile 444 8 233. Ukuze ugcine inombolo engqondweni, kusuka ku-444 kuya esikrinini sokushaya ocingweni lwakho [Okuningi ...]
Izinyathelo zokuphepha ze-Kovid-19 ezithathwe kuZithuthi zikaloliwe!
UNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nezingqalasizinda u-Adil Karaismailoğlu wenza isitatimende kwabezindaba eLfallki, lapho ahambele khona umcimbi wokugcotshwa kwebhulokhi lokugcina emibhoshongo yensimbi Çanakkale Bosphorus Bridge. UKaraismailoğlu echaza amaphrojekthi oMnyango wakhe ngalesi sikhathi esisha, ngesitimela [Okuningi ...]
Isitatimende sikaMasipala waseTekirdağ weTekirdağ Port
Amasu weTekirdağ Port Embankment aqala ukuvunywa ngo-1997 nguMnyango Wezemisebenzi Yomphakathi Nokuhlaliswa Kwawo. Kamuva, lesi sikhumulo senziwa sangasese futhi saqhubeka nemisebenzi yaso ngaphansi kwegama le-Akport Port. Ngo-2006, [Okuningi ...]
I-Scissors Modified in Konya Tram Line
UMasipala waseKonya Metropolitan uyaqhubeka nokuthinta ezothuthukisa ukuhamba kwezimoto kulo lonke leli dolobha ngokuguqula izinsuku zokufika ekhaya zibe ngamathuba. IMeya yaseKonya Metropolitan Uğur İbrahim Altay, umgwaqo lapho izakhamizi zisekhaya [Okuningi ...]
Imali Yentela Ikhuphuke ngo-5% ngonyaka e-Istanbul
Amaphesenti angama-45,5 wemali yentela ephelele eqoqwe eTurkey e-Istanbul, imali yentela inyuke ngamaphesenti ama-5 uma kuqhathaniswa nonyaka owedlule. Isabelo sentela yangasese yokusetshenziswa kwemali engenayo kwisabelomali esivamile singamaphesenti angama-21, emalini yentela [Okuningi ...]
UMeya we-Izmir Metropolitan uTunç Soyer uhlole imisebenzi esheshayo ye-asphalt yokwenza umsebenzi ezinsukwini lapho kwenziwa isikhathi sokufika ekhaya. USoyer uphinde wanikeza izindaba ezinhle nomgwaqo ophambi kwesikhungo sokuthenga eGaziemir ubheke ngaseKonak. [Okuningi ...]
Indawo Yesikhungo Sokuhamba Sendawo esizayo eTurkey
Enkulumweni yakhe emcimbini wokuqedwa kwesakhiwo sase-Çanakkale 1915 Bridge, uMongameli u-Erdoğan uthe, "Sineemisebenzi eminingi yemigwaqo, yesitimela, yomoya neyasolwandle esakhiwa njengamanje. Lapho lokhu kuqediwe, Turkey, [Okuningi ...]
Kwenziwa Imigwaqo Emisha Ukusetshenziswa Kwamabhayisekili Azoyanda Ngemuva Kobhubhane Ku-Izmir
IMeya kaMasipala wase-Izmir Metropolitan uTunç Soyer usheshisa imisebenzi yemigwaqo yamabhayisekili ngokumelene nobuningi bethrafikhi okulindeleke ukuthi inyuke nenqubo yokujwayelekile. USoyer, ohamba ngemigwaqo ehamba ngebhayisekili lakhe eyohlola amaphrojekthi asendaweni, uthe, “Ngemuva kokusabalala kwesibhubhane, [Okuningi ...]
Kwi-Mevlana Development Agency yeRiphabhliki yaseTurkey, Umthetho Nombolo 5449 kuzinsizakalo Zokusebenza Kwama-ejensi Wentuthuko, Izikhungo Zentuthuko Yezisebenzi Nezikhungo Ezihlangene Nezinhlangano kanye Nezinye Izikhungo Nezinhlangano Ezihambisana Nongqongqoshe Nombolo 4 [Okuningi ...]
I-Precision Guidance Kit nge-Laser Wanter Iqonde ku-Inventory ye-Turkish Air Force
Idizayinelwe futhi yathuthukiswa ngokubambisana ne-TÜBİTAK SAGE ne-ASELSAN, izinhlamvu zeSensitive Guided Kit zanezelwa ekhanda labafuna ulwazi kanye nokunemba kwamabhomu enhloso eyejwayelekile. Esitatimendeni esenziwe ku-akhawunti yezokuxhumana ye-TÜBİTAK SAGE [Okuningi ...]
Izinkokhelo Zokusekela Umanyolo Zezinto Eziqalisiwe Zabalimi!
Ungqongqoshe Wezolimo Namahlathi UBekir Pakdemirli wenze isitatimende mayelana nezinsizakalo okufanele zisetshenziswe kubalimi abasebenzisa umanyolo we-organic ne-organomineral ngonyaka ka-2019. Isitatimende sikaNgqongqoshe uPakdemirli sinje; “Indaba yemvelo yenhlabathi yezwe lethu [Okuningi ...]
Ukukhiqizwa Kagesi Kuqala Ngakusasa eDolobheni lase-Ilısu
ITurkey, okungenye yamaphrojekthi wamandla amakhulu wokuphehla ugesi e-Ilisu, ongowokuqala kwabazukulu abayisithupha, ngoMeyi 19 kwaqalwa isikhumbuzo se-Atatürk ne-Youth and Sports Day. Nendlela yengqungquthela yevidiyo kaMongameli Recep Tayyip Erdoğan [Okuningi ...]
Amathayimitheshini we-Baskentray, Iziteshi kanye Namanani Amathikithi
IBaşkentray Ankara ingenye yamaphrojekthi aba nomthelela omkhulu ohambweni lwedolobha lwangaphakathi. I-Ankara-Istanbul, Ankara, Sivas ne-Ankara, amaphrojekthi weKonya High Speed ​​Sitimela e-Ankara [Okuningi ...]
I-Trade Fair nge-Local neNational Software Contribution Izokwenza Isitembu
UNgqongqoshe Wezohwebo, uRuhsar Pekcan, uthe uzoqala ukukhombisa amakhono ahlelelwe ukugcwaliseka kwemibono emisha ye-coronavirus (Kovid-19) ngesicoco nesikhumba "iShoedexpo" ngoJuni 1-3. [Okuningi ...]
IBodrum Castle izovulwa ekupheleni kukaJuni, eSumela Monastery kusukela ekuqaleni kukaJulayi
UNgqongqoshe Wezamasiko Nezokuvakasha, uMehmet Nuri Ersoy, uthe sekusondele ukuphela kwesigaba sesibili eBodrum Castle, nokuthi bahlela ukuvula inkundla ezobahambela ekupheleni kukaJuni. Ungqongqoshe Ersoy, ubuyiselwe eBodrum castle [Okuningi ...]
Isikhathi sokubikwa kwezikhungo ze-R&D sinwetshiwe
Isikhathi sokulethwa kwemibiko yezimali yoMnyango Wezimboni Nobuchwepheshe, iR & D kanye nezikhungo zokudizayina, kanye nemibiko yokuhlolwa kwezimali kwamabhizinisi ezindaweni zeTekhnoloji yokuThuthukisa (i-TGB) isikhathi esingangenyanga eyodwa, kuya kumhlaka 30 Juni 2020. [Okuningi ...]
UZehra Zümrüt Selçuk, Ungqongqoshe Wezemindeni, Wezabasebenzi kanye Nezenhlalo; "Ngenxa yokubaluleka kokuhlinzeka ngezinsizakalo ezenzelwe umndeni, siqinisekise ukuthi izingane ezingama-2019 17 zibuyela emindenini yazo ngonyaka ka-273." etholakala encazelweni. Kwezenkonzo ezinganeni [Okuningi ...]